Nhau - Kushanda kweiyo ultrasonic yekucheka tekinoroji mune zvemagetsi zvigadzirwa
Abstract: Ultrasonic tekinoroji inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri. Iri bepa rinosuma musimboti wekucheka kweiyo ultrasonic, uye wobatanidza iyo mienzaniso yezvimwe zvigadzirwa zvemagetsi kuenzanisa mhedzisiro yekugadzira michina nekucheka laser, uye kudzidza mashandisirwo eiyo ultrasonic yekucheka tekinoroji.
Ultrasonic yekucheka ndeye yepamusoro-tech tekinoroji yekucheka thermoplastic zvigadzirwa. Ultrasonic yekucheka tekinoroji inoshandisa iyo ultrasonic kutenderera kutema workpieces. Ultrasonic yekushongedza michina uye zvikamu zvacho zvinokodzerawo otomatiki ekugadzira nharaunda. Ultrasonic yekucheka tekinoroji inoshandiswa zvakanyanya mukutengesa uye kwevatengi zvemagetsi, mota, simba nyowani, kurongedza, zvekurapa, kugadzira chikafu uye mimwe minda. Nekukurumidza kukurumidza kwehupfumi hwepamba, huwandu hwekushandisa huchawedzera nekukura, uye kudiwa mumusika kuchawedzera kuwedzera. Naizvozvo, ultrasonic yekucheka tekinoroji ine hukuru hukuru tarisiro.
· Kugadzira kwemuchina
Zvokuimba kucheka ndiko kupatsanurwa kwezvinhu nema mechanical nzira pane yakajairwa tembiricha, sekucheka, kucheka (saw saw, wafer saw, sand sand saw, nezvimwewo), milling zvichingodaro. Mechiniki yekucheka inzira yakajairika yekukwirisa zvinhu uye inotonhora inotemwa. Chakakosha ndechekuti izvo zvinoshandiswa kuti zvigadziriswe zvinosvinwa nesikisi kuti igoitwa dear deformation uye kudzora nzira yekuparadzanisa. Maitiro ekucheka michina anogona kuve akapatsanurwa kuita matatu akateedzana matanho: 1. kwakavharwa nenyama deformation nhanho; 2. epurasitiki deformation nhanho; 3. kupaza danho
· Laser kucheka
3.1 Musimboti wekucheka laser
Laser yekucheka inoshandisa yakatarisana-yakasimba-simba-density laser danda kuvhenekera iyo workpiece, kudziisa izvo zvinhu kuzviuru kusvika makumi emadhigirii Celsius munguva pfupi pfupi, zvichibvumira izvo zvinhu kuti zvive nemiradi kuti ikurumidze kunyungudika, kufema, kuburitsa, kana kubatidza, paunenge uchishandisa danda Iyo coaxial yakakwira-mhanya yekufema yemhepo inovhuvhuta kubva pazvinhu zvakaumbwa, kana iyo vaporized zvinhu zvinopepereswa kubva pakatsemurwa, nekudaro ichicheka iyo workpiece kuti iite chinangwa chekucheka izvo zvinhu. Laser nokuveza ndeimwe inopisa nokuveza nzira.
3.2 Laser yekucheka maficha:
Senzira nyowani yekugadzirisa, kugadzira laser kwave kushandiswa zvakanyanya muindasitiri yemagetsi nekuda kwekunakira kwayo kwakaringana, nekukurumidza, kushanda kuri nyore uye nhanho yakakwira yekushandisa. Inofananidzwa neyechinyakare yekucheka nzira, iyo laser yekucheka muchina haisi yakaderera chete mumutengo, yakaderera mukushandisa, uye nekuti iyo laser yekugadzirisa haina michina kumanikidza pane iyo workpiece, mhedzisiro yekucheka chigadzirwa, iko iko iko uye iyo yekucheka kumhanya zvakanyanya zvakanaka, uye kuvhiya kwakachengeteka uye iko kugadzirisa kuri nyore. Zvimiro senge: Chimiro chechigadzirwa chakatemwa nemuchina we laser hachisi yero, iyo otomatiki kumucheto haina kusununguka, hapana deformation, hapana kuomarara, saizi inoenderana uye yakarurama; anogona kutema chero yakaoma chimiro; kugona kwepamusoro, mutengo wakaderera, dhizaini dhizaini Inogona kutema chero saizi lace mune chero chimiro. Kukura kwekukurumidza: Nekuda kwekusanganiswa kwemalasi uye tekinoroji yemakomputa, vashandisi vanogona kugadzira michina yekuveza laser uye nekushandura iyo engra chero nguva chero bedzi ivo vakagadzirwa pakombuta. Laser kucheka, nekuti danda risingaonekwe rinotsiva echinyakare mehendi banga, iyo mechiniki chikamu che laser musoro haina kusangana nebasa racho, uye harizonetse nzvimbo yekushanda panguva yebasa; iyo laser yekucheka kumhanya inokurumidza, iyo incision inotsvedzerera uye yakati sandara, kazhinji hapana kudikanwa Kwotevera kugadzirisa; hapana kushushikana kwemuchina mune iyo incision, hapana shear burr; yakanyanya kugadzira chaiyo, yakanaka kudzokorora, hapana kukuvara pamusoro pechinhu; NC kuronga, inogona kugadzirisa chero chirongwa, inogona kutema ndiro yese ine hombe fomati, hapana chikonzero chekuvhura iyo mold, mari yekuchengetedza nguva.
· Kugadzira Ultrasonic
4.1 Ultrasonic yekucheka musimboti:
Iine yakasarudzika dhizaini yemusoro wekusimbisa uye hwaro, iwo musoro wekusungira wakasvinwa kumucheto kwechigadzirwa chepurasitiki, uye iyo ultrasonic vibration inoshandiswa kucheka chigadzirwa kuti chibudirire iyo yekucheka mhedzisiro nekushandisa iyo ultrasonic vibration inoshanda musimboti. Sezvazviri nemaitiro echinyakare ekugadzirisa, iro musimboti weiyo ultrasonic yekucheka tekinoroji ndeye kushandisa elektroniki ultrasonic jenareta kuburitsa iyo ultrasonic mafungu eimwe nhanho yezvimisikidzo, uyezve iyo yekutanga amplitude uye simba zvidiki neiyo ultrasonic-yemuchina shanduko yakaiswa mune iyo ultrasonic kucheka musoro. Iyo ultrasonic vibration inoshandurwa kuita mehendi vibration yeiyo yakafanana frequency, uye ndokuzowedzeredzwa ne resonance kuwana yakakura yakakwana amplitude uye simba (simba) kusangana nezvinodiwa zvekucheka iro rekushandira. Chekupedzisira, iyo simba inopfuudzwa kumusoro wekutema, uyezve chigadzirwa chinochekwa. Zvakanakira kutsemurwa zvakatsetseka uye hazvina kutsemuka.
Ultrasonic yekucheka vibration system inonyanya kuve yakagadzirwa neiyo ultrasonic transducer, ultrasonic runyanga uye nemoto musoro. Pakati pavo, basa reiyo ultrasonic transducer kushandura iyo magetsi chiratidzo kuva acoustic chiratidzo; runyanga chinhu chakakosha chikamu cheiyo ultrasonic yekugadzirisa michina. Iyo ine maviri akakosha mashandiro: (1) simba-kusimbisa-ndiko kuti, iyo yemagetsi vibration kusudurwa kana velocity amplitude inokwidziridzwa, kana simba racho rakanangiswa pane diki mwaranzi pamusoro pekusangana kwesimba; (2) simba reacoustic rinotapurirana nemutoro- Sechimakanika chekushandura, impedance enzanirana inoitwa pakati petransfer uye acoustic mutoro kubvumidza simba re ultrasonic kutapudzwa kubva mutruducer kuenda kumutoro zvakanyanya.
4.2. Zvimiro zveiyo ultrasonic yekucheka:
Kana iyo ultrasonic wave ichifara kusvika padanho repamusoro, icho chigadzirwa chinonyungudika nekuda kwekukwirira kwetembiricha mukati meemolecular kunakidzwa uye kupesana kwemukati.
Ultrasonic yekucheka maficha. Ultrasonic yekucheka ine zvakanakira kutsetseka uye kusimba incision, chaiyo yekucheka, hapana deformation, hapana kumonyoroka, fluffing, kutenderera, kuunyana uye zvichingodaro. Inodzivirirwa "laser yekucheka muchina" ine zvayakanakira zvekukanganisa kucheka, nzvimbo yekumusoro, pilling, nezvimwe. Zvakanakira kugadzirwa kweiyo ultrasonic zvinosanganisira: 1. Kumhanya nekukurumidza kumhanya, neyakajairika nguva yekutenderera isingasviki sekondi imwe. 2. Izvo zvikamu zvepurasitiki hazvina kusimbiswa; 3. Nzvimbo yekucheka yakachena; 4 Nzvimbo zhinji dzinogona kutemwa panguva imwechete yekuparadzanisa otomatiki 5 Ultrasonic yekucheka haina-kusvibisa.
Ndeupi rudzi rwezvinhu urikuchekwa uchishandisa ultrasound? Iri rakanakisa basa reyakaomarara thermoplastics (polycarbonate, polystyrene, ABS, polypropylene, nylon, nezvimwewo). Ivo vanodarika mehendi simba zvakanyanya. Kuomarara kwakadzika (modulus yeelasticity) thermoplastics senge polyethylene uye polypropylene inonaya magetsi simba uye inogona kupa mhedzisiro isingaenderane.
Zvichienzaniswa nemhedzisiro yekugadzira michina, kucheka kwemalaser uye kucheka kweiyo ultrasonic, iyo ultrasonic inonyanya kukodzera kucheka nzeve yechigadzirwa, uye mhedzisiro yacho yakanaka, kusangana nezvinodiwa zvekucheka kwechigadzirwa, uye kugona kweiyo ultrasonic yekucheka ndiyo yepamusoro. Ultrasonic yekucheka mhinduro yakanaka kune izvo zvinodikanwa zvekucheka kwechigadzirwa.
Nekudzikira zvishoma nezvishoma kwekutsvaga kweiyo ultrasonic yekucheka tekinoroji, zvinofungidzirwa kuti munguva pfupi iri kutevera, ichave yakanyatso shandiswa.